मनीषाको आत्मकथा- म मर्न चाहन्नँ :: Setopati
मनीषा कोइराला साउन ३२
(अभिनेत्री मनीषा कोइरालाको ५० औं जन्मदिनको अवसरमा हामीले २०७५ साल पुसमा प्रकाशन गरेको यो स्टोरी पुनः प्रकाशन गरेका हौं।
'म मर्न चाहन्नँ।'
जति नै चलमलाए पनि अन्धकार आफ्नो अष्टबाहु फैलाएर मेरो घाँटी निचोर्दै थियो। मेरो आँखाअगाडि टाढा-टाढासम्म उज्यालो प्रकाशको एक धर्सो पनि थिएन। अन्धकार मेरो कमजोर शरीरलाई आफ्नो पासोमा जकडेर मभित्र प्रवेश गर्दै थियो, एकदमै तीव्र गतिमा। विस्तारै त्यो मेरो शरीरभरि फैलियो। र, पेटको पिँधमा पुगेर मलाई गिजोल्न थाल्यो।
आमालाई मेरो ममताले तानेर फर्काउला भन्ने मैले कत्रो आश लिएकी थिएँ। कति न पर जानुहोला र! एक–दुई पाइला त हो नि! त्यसपछि उहाँ फरक्क फर्केर म नजिक आउनुहुनेछ, र मलाई अंगालो मारेर जुरुक्क आफ्नो काँधमा बोक्नुहुनेछ!
'तपाईं किन फर्कनुभएन आमा?' मैले धेरै वर्षपछि उहाँलाई सोधेँ।
'म मेरी सानी छोरीलाई उसकी आमाको भिजेको आँखा कसरी देखाउन सक्थेँ,' आमाको जवाफ थियो।
म एक्ली कहाँ हो र! नेपालको राजनीतिक उथलपुथलबीच हजुरआमाले परिवारका थुप्रै केटाकेटी स्याहार्नुभएको थियो। उहाँको ममतामयी स्याहारले राजनीतिक बादलको लुकामारी मेरो हुर्काइमा पर्ने छैन भन्ने आमाले राम्ररी बुझ्नुभएको थियो।
प्रियजनबाट त्यागिनुको त्यस्तै अनुभूति मलाई मेरो विवाह बन्धन चुँडिएपछि भयो। मैले यो सम्बन्ध सकुशल राख्न खुब कोशिश गरेँ। जब धागो चुँडियो, पीडाको बज्रपातले मेरो छाती मात्र होइन, आत्मा नै चिरियो। दोष कसैलाई दिन्नँ। गुनासो पनि गर्दिनँ। यत्ति हो, हामी दुवै नितान्त अलग व्यक्ति थियौं। चुम्बकका एकै ध्रुवजस्ता। हामी एकअर्काका निम्ति बनेकै थिएनौं। किन मेरो छनौटमा सधैं गलत मान्छे नै पर्छ?
यो धागो चुँडिदा पनि म खुब छटपटाएकी थिएँ। इष्टमित्र र परिचितहरूका प्रश्नमय आँखा मेरा अगाडि तेर्सिएका थिए। मैले आफ्नो सम्बन्ध किन सम्हालेर राख्न सकिनँ? यस्तै प्रश्नले मेरो सुर्ता थपेको थियो।
म झ्यालतिर एकटक नियालिरहेकी थिएँ। तुसारोले सिसा भिजेका थिए। तुसारोको तगारो नाघेर बाहिरको न्यानो उज्यालोले मेरो चिसो शरीर छुन सकिरहेको थिएन। छोएको भए म पनि न्यानो हुन्थेँ कि!
म जति आँखा नचाउथेँ, मृत्यु मुख बाएर मैलाई घुरिरहेझैं लाग्थ्यो। के मेरो जीवित अस्तित्व निर्जीव आँकडामा सीमित हुँदै गइरहेको छ?
'मनीषा, तिमी यो लडाइँ जितेर अगाडि बढ्नेछौ,' आशा मलाई आश्वस्त पार्थी।
उतिन्खेरै मृत्यु आफ्नो फण उठाउँथ्यो, 'तिमीलाई त पाठेघर क्यान्सर पो भएको छ मनीषा, त्यो पनि तेस्रो चरणको।'
'यस्तो रोग लागेका ४४ प्रतिशत बिरामी बाँचेका छन्,' आशा मुसुक्क हाँस्दै मलाई थुम्थुम्याउँथी।
उतिन्खेरै मृत्यु दारा देखाउँदै भन्थ्यो, 'ढुक्क नहोऊ मनीषा, यस्तो रोग लागेका ५६ प्रतिशत बिरामी मरेका छन्।'
जब जब म आफैंसँग अतासिन्छु, मेरो मन मेरै शिवपुरी जंगल र काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका पदमार्गहरूमा फन्को मार्न थाल्छ। आँखाले समेट्न नसक्ने हरियालीबीच मलाई आफ्नै ज्यान कपासझैं हलुंगो अनुभूति हुन्छ। मेरा पाइलाहरू पदचिह्न पछ्याउन थाल्छन्। ती मेरै पदचिह्न हुन्, मैले नै छाडेर आएको। आफ्नै पदचिह्न पछ्याउँदा यस्तो लाग्छ, मानौं म आफूभित्रको 'म'लाई पछ्याउँदैछु। आफैंलाई खोज्दैछु। आफैंलाई चिन्दैछु।
ती सुन्दर पल बाँचिरहँदा मलाई थाहा थिएन, मेरो यात्रा सहज छैन। विधिले मेरो मुटुको क्यानभास सफलताको खुसीले मात्र भर्ने छैन। ती सबै संवेदनाहरू पोख्न पनि उत्तिकै उदारता देखाउनेछ, जुन हामी जिन्दगीमा भोग्न नपरे हुन्थ्यो भन्ठान्छौं। हामीले ठानेर मात्र कहाँ हुन्छ र? मेरो मुटुको क्यानभासमा असफल सम्बन्धले दिएको निराशा लेखियो। अनपेक्षित धोकाको पीडाले भरियो। अवसर खुम्चिँदै जाँदाको छटपटीले छोप्यो।
जसले मलाई एक्लै बर्बराउन बाध्य पार्यो– 'म मर्न चाहन्नँ।'
आमाको उपस्थितिले नै मेरो फड्फडाइरहेको मुटुलाई सन्तोक दिइरहेको थियो। अब उहाँले मलाई सुखद खबर सुनाउनुहुनेछ! म आशातीत नजरले उहाँलाई हेर्न थालेँ। तर, किन आमा आज मलाई देखेर पनि मुस्कुराउनुभएन? किन उहाँ मेरो आँखासँग आफ्नो आँखा मिलाउन सक्नुभएको छैन? उहाँको आँखामा किन म उही चमक देख्दिनँ, जुन मलाई देख्दा सधैं तैरिने गर्थ्यो?
कहाँ छन् डा. डेनिस ची? उही त हुन् मेरा रक्षक। आखिर के हुँदैछ यहाँ?
मध्यरात। म काठमाडौंको नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालको सेतो चादर बिछ्याएको शैयामा लम्पसार थिएँ। एक्लै।
म किन यहाँ छु? किन सडकको अर्कोपट्टि प्रसूति गृहमा छैन? मलाई यहाँ प्रसूतिको निम्ति किन भर्ना गरिएन? के म कुनै दिन मेरो आफ्नो बच्चालाई अंगालोमा च्याप्न सक्छु?
झ्यालबाट छिरेको चन्द्रमाको चाँदनीमा मैले आफ्नै कोठा नियालेँ। कस्तो सुग्घर! कति व्यवस्थित! यहाँ हरेक चिज कसरी ठीक–ठीक ठाउँमा राखिएको! जुन चिज जहाँ हुनुपर्छ त्यहीँ! एक इन्च तलमाथि छैन!
कोठामा छिर्दा पनि मैले ख्याल गरेकी थिएँ, अस्पतालको यो भाग निकै आकर्षक थियो। मलाई लाग्यो, यो अतिविशिष्ट (भिआइपी) व्यक्तिहरूको निम्ति छुट्टयाइएको शाखा हो।
त्यो पूरा रात मैले घोप्टो सुतेर काटेँ। दुखाइ कतिविधि थियो भने, म कोल्टे फेर्न पनि सक्दिनथेँ। मलाई त्यस्तो के भइरहेको थियो? म आफैंसँग भुत्भुतिएँ। रनभुल्ल परेँ। डरले जीउभरि काँडा उम्रिए।
'म अब यो पीडा सहन सक्दिनँ। मलाई यो के भइरहेको छ, पत्ता लगाउनुछ।'
त्यो बिहान जब डा. मधु घिमिरेले मेरो परीक्षण गरे, मलाई सास फिरेजस्तो भयो। अब उनी भन्नेछन्, 'सामान्य संक्रमण हो मनीषा, चिन्ता लिनुपर्दैन। केही दिनमै ठीक हुन्छ।'
'तपाईंको पेटमा धेरै तरल पदार्थ जमेको छ, यसलाई झिकेर परीक्षण गर्नुपर्छ,' डा. घिमिरेले भने।
उनले सुई झिके। सुई देख्नेबित्तिकै मेरो जीउ कक्रक्क पर्यो। उनले त्यसको वास्तै नगरी पेटमा रोपे। पेटभित्र जमेको तरलको थोरै अंश विस्तारै सुईमा सर्यो। उनले त्यो नमूना 'बायोप्सी' निम्ति पठाउने बताए।
मलाई कलेजोकै कुनै गम्भीर रोग लागेको रहेछ भने के गर्ने? त्योभन्दा पनि भयानक अर्थोकै केही भएको रहेछ भने के गर्ने? हे परमात्मा, तिमी मेरो पुकार सुन्दैछौ? मलाई स्वस्थ बनाइदेऊ!
त्यो पर्खाइको बीचमा मैले सयौंचोटि नर्सलाई सोधेँ, 'डा. घिमिरे कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ कहिले आउनुहुन्छ?'
नर्सले पनि सयौंचोटि मलाई जवाफ दिइन्, 'उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। जतिसक्दो छिटो आउनुहुनेछ।'
किन कोही पनि केही समाचार लिएर आइरहेका छैनन्? मेरो पेटबाट निकालिएको त्यो तरल बयोप्सीको निम्ति पठाइएको होइन र?
अचम्म! यिनीहरू किन यस्तरी हुल बाँधेर मलाई हेर्न आए?
मेरो मनको एउटा भाग थर्कमान भयो। मैले थकान, छटपटाहट र तनावले गलेको स्वरमा सुस्तरी सोधेँ, 'के भयो? तिमीहरू मलाई किन केही भन्दैनौ?'
मेरा अचम्भित आँखाहरू डा. घिमिरेमा गएर अडिए। उनी मेरो परिवारका सदस्यहरूको भिडमा पछाडि उभिएका थिए। उनी त्यहाँबाट विस्तारै अगाडि सरेर मेरो नजिक आए। उनी यति विस्तारै पाइला चाल्दै थिए, मानौं एक–एक पाइला गन्दै छन्। मैले उनका आँखा चम्किला देखेँ। के उनका आँखामा आँसु टिल्पिलाएको हो? कि, त्यो दिनभरिको थकानको असर हो?
के उनी बोल्न खोज्दैछन्? धन्न!
कृपया केही त बोल्नू डाक्टर? के भएको छ मलाई, केही त भनिदिनू?
'मनीषा, अचेल यस्तो कुराको उपचार हुन्छ।'
'उपचार? तपाईं कस्तो उपचारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ?' मैले आफ्नो भासिएको स्वर अलिकति उचालेर सोधेँ।
'समय पहिलेजस्तो छैन। विज्ञानले धेरै तरक्की गरिसक्यो। अचेल यस्तोमा धेरै राम्रो उपचार हुन थालेको छ। मान्छेहरू लामो समय बाँच्न थालेका छन्,' उनले अझै कुरा चपाए।
'तपाईं के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर? कुन उपचारको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ?' मैले उस्तै व्यग्रतासाथ सोधेँ।
'मनीषा, तिमीलाई क्यान्सर भएको छ!'
'क्यान्सर?' मैले एक–एक अक्षर तौलँदै उच्चारण गरेँ। यस्तो लाग्यो, कोठाभित्र मेरो आवाज थर्किंदैछ।
'मलाई कसरी क्यान्सर हुन सक्छ?'
मैले यो प्रश्न यस्तरी सोधेँ, मानौं यो रोग अरूलाई लाग्न सक्ला, मलाई कसरी लाग्न सक्छ? म स्वस्थ छु। पोसिलो खान्छु। आहारविहारमा ध्यान पुर्याउँछु। केही समयदेखि त माछामासु र जाँडरक्सी बारेको पनि छु। होइन, होइन। कहीँ कतै कसैबाट गल्ती भएको हुनसक्छ! यो मलाई लाग्ने खालको रोगै होइन!
मेरो मनको तर्कना भंग गर्दै डा. घिमिरेले उस्तै सुस्तरी भने, 'पाठेघरको क्यान्सर, अन्तिम चरणको।'
म भन्दै थिएँ, 'त्यसो हो भने किन तपाईं यसलाई काटेर फाल्दिनुहुन्न?'
मेरी काकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। केही समयअघि उहाँले पुटुक्क उठेको पेट हेर्दै भन्नुभएको थियो, 'मनीषा, कतै तिमी गर्भवती त भएकी छैनौ?'
मैले उहाँलाई भनेकी थिएँ, 'यो सम्भव छैन।'
त्यही गर्भ रहने पाठेघर मैले चटक्क चुँडालेर फाल्ने कुरा गर्दा डा. घिमिरेले प्रस्ट, तर पराजित शैलीमा भने, 'कति काट्नु? कहाँसम्म काट्नु? क्यान्सर जताततै फैलिसक्यो।'
डा. घिमिरे त्यसपछि मलाई आगामी उपचार विधि बताउन थाले। संसारमै क्यान्सरको उत्कृष्ट उपचार हुने अमेरिका जान सल्लाह दिए। मेरो मस्तिष्कले भने उनका कुनै पनि कुरासँग तालमेल मिलाउन सकिरहेको थिएन।
'मनीषा, तिमी मुम्बईमा घर किन।'
शाहरुख खान मलाई सधैं भन्ने गर्थे, 'आफ्नै घर किनेर बस्यौ भने मात्र मुम्बई तिमीलाई आफ्नै जस्तो लाग्नेछ।'
सन् १९९१ मा सुभाष घईको 'सौदागर' बाट बलिउडमा प्रवेश गरेपछि मैले संख्यात्मक रूपमा थोरै काम गरेँ हुँला। तर, तीमध्ये केही काम गुणात्मक रूपले उत्कृष्ट थिए।
शाहरुख भन्ने गर्थे, 'मुम्बईमा आफ्नै घर किनेपछि बल्ल मलाई यहाँ जरो गाडेको अनुभूति हुनेछ। यायावरझैं एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ भौंतारिने मान्छे होइन, एउटा स्थायी ठाउँमा स्थापित भएझैं लाग्नेछ।'
मेरो जिन्दगीको यो रहस्य यिनीहरूले कसरी चाल पाए?
म उनीहरूको सहानुभूतिपूर्ण हेराइले झनै तर्सिन्थेँ। छेउमा आमा हुनुहुन्थ्यो। भित्रभित्रै आँसु निलेर मुखमा मधुरो हाँसो छर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद, उहाँलाई डर थियो म डराउँला कि भन्ने। उहाँलाई सुर्ता थियो, मैले सुर्ता लिउँला कि भन्ने। आमा न हो!
मलाई उहाँको खुबै माया लाग्यो। आमाको काखमा उसको बच्चाको मृत्यु– यो भावीको नियमित विधान त हुँदै होइन। कसरी सम्हाल्छन् होला ती आमाहरू आफूलाई? कसरी सम्हाल्नुहोला मेरी आमा आफूलाई?
म आफ्नो भय र तनाव हड्डीहरूमा समेत महशुस गर्दै थिएँ। लुला भएका थिए मेरा हातगोडा। मानौं, त्यहाँ हड्डीको भरै छैन।
म यो पनि चाहन्नथेँ, हाम्रो यो क्लेश कसैले देखोस्! म सार्वजनिक आँखाहरूबाट हाम्रो त्यो क्लान्ति लुकाउन चाहन्थेँ। मैले आमाको पहेँलिएको अनुहार हेरेँ। आकाशे–निलो बर्को ओढ्नुभएको थियो। मैले त्यही बर्को तानेर उहाँको मुख ढाकिदिएँ।
मैले त्यतिबेला ट्रयाकसुट लगाएकी थिएँ। आफ्नो पुट्ट फुलेको पेट ढाक्न ट्रयाक प्यान्ट कम्मरभन्दा मुनि सारेकी थिएँ। अरूले हेर्दा सायद म सामान्य थिएँ। बलिउड अभिनेत्री हुँ, पर्दामा जस्तै वास्तविक जीवनमा पनि शान्त र निश्चिन्त भएको अभिनय गर्दै थिएँ। पर्दापछाडिको यथार्थ भने फरक थियो। मेरो मन मेरै काबुमा थिएन।
मेरा हातगोडा लगलग काम्दै थिए। कतिखेर यो जहाज मुम्बई अवतरण गरोस्, र कतिखेर म मुम्बईको व्यस्त ट्राफिक छिचोलेर डा. आड्वानीलाई भेटुँ– मलाई खाली यत्ति ध्याउन्न थियो।
त्यस दिन डा. आड्वानी व्यस्त रहेछन्। उनले मलाई जसलोक अस्पतालमै साँझतिर भेट्न डाकेका थिए। पछिल्लो केही वर्षदेखि उनीसँग मेरो एक किसिमको सहकार्य छ। मैले क्यान्सरपीडित केही गरिब नेपाली बालबालिकालाई उनीकहाँ उपचार निम्ति पठाएकी छु। मैले पठाएका सबै बिरामीलाई उनले उत्तिकै स्नेहसाथ उपचार गरेका छन्।
अब तिनै डाक्टरलाई म बिरामीका रूपमा भेट्नेछु।
मैले आफ्नो टोपी तल तानेँ। ठूलो आकारको सनग्लासले आँखा मात्र होइन, आधै अनुहार ढाकियो।
मुम्बईको हावामा सास फेर्दा मलाई झट्ट दुइटा अनुभूति भयो– यहाँको तातोपन र समुद्री हावामा भरिएको नुनिलो बासना। मलाई याद छ, धेरै वर्षअघि १६ वर्षे स्कुलेकिशोरीका रूपमा पहिलोचोटि मुम्बई आउँदा पनि मैले यही अनुभव गरेकी थिएँ।
विमानस्थलबाट बाहिर निस्कँदा मलाई यस्तो लाग्दै थियो, मेरो मुटुमा कसैले जोड जोडसँग हतौडा बजार्दैछ। म पसिनाले लुछुप्पै भिजेकी थिएँ। त्यो गर्मीको पसिना होइन। मुम्बईको गर्मीले मलाई कहिल्यै त्यतिविधि अत्याएन। त्यो मभित्रको आत्मबल थियो सायद, जुन पसिनाको रूपमा बाहिर चिट्चिटाउँदैछ। आमा पनि उसैगरी थरथर काम्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँको पाखुरा बलियो गरी समातेँ र कानमा फुस्फुसाएँ, 'आफूलाई सम्हाल्नुस् आमा।'
म आमालाई सम्हाल्न खोज्दै थिएँ, मेरै स्वर भने लत्रेको थियो।
विमानस्थलबाहिर जसलोक अस्पतालको एम्बुलेन्स हामीलाई लिन आएको रहेछ। म एम्बलुेन्समा जान चाहिनँ। आफ्नै कारमा चढेँ। जिन्दगीले मलाई अपरिचित परिस्थितितर्फ धकेलिरहेका बेला म परिचित वातावरणको सन्निकटता खोज्दै थिएँ। त्यसले मलाई एक किसिमले सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि दिन्थ्यो।
म आफ्नै कारको आरामदायी छालाको सिटमा पसारिएँ। टाउकोलाई फूलबुट्टे सिरानीमा अड्याएँ। र, लामो सास तानेँ।
हामी जसलोक अस्पताल जाँदै थियौं। जीउभरि तनावका काँडा उम्रेका थिए। मलाई डाक्टर भेट्ने हतार थियो। मुम्बईमा मान्छेहरू जति हतारमा हुन्छन्, ट्राफिक उति सुस्त चल्छ। यहाँको ट्राफिक नै सुस्त हो कि, मान्छेलाई बढी हतार भएको हो, मैले कहिल्यै बुझ्न सकिनँ।
हाम्रो गाडी व्यस्त सडकको बीचमा असंख्य निजी कार, ट्याक्सी, अटोरिक्सा, बस र ट्रकले घेरियो। उनीहरू सबै अधीर थिए।
म उनीहरूभन्दा अधीर।
छटपटी र तनावको संयोग निकै खराब हुँदो रहेछ। जीउभरि पसिनाका फोकाहरू एकैचोटि फुट्ने। यस्तो बेला त मान्छेसँग पनि पखेटा भइदिए हुन्थ्यो नि बरु!
मन चरा गतिमा जसलोक अस्पताल पुग्न चाहन्थ्यो, हामी भने चिप्लेकीराझैं घिस्रिरहेका थियौं।
विमानस्थलबाट जसलोक पुग्न हामीलाई ठ्याक्कै डेढ घन्टा लाग्यो। त्यो डेढ घन्टा मेरो निम्ति डेढ जुनी बराबर थियो।
डा. आड्वानीको जीवनकथाले मलाई सधैं प्रोत्साहित गर्छ। उनलाई आठ वर्षको उमेरमै पोलियो भयो। ह्विलचेयरमा हिँडडुल गर्छन्। उनको आत्मबल यति उच्च छ, आफूलाई कहिल्यै ह्विलचेयरसँग उनेर राखेनन्। कुनै बेला शारीरिक अपांगताकै कारण उनलाई मेडिकल कलेजले भर्ना लिन मानेको थिएन। उनले तै हार खाएनन्। विदेश गए। त्यहाँका उत्कृष्ट डाक्टरहरूको सानिध्यमा आफ्नो बौद्धिक कद बढाए। र, सन् सत्तरी दशकको प्रारम्भमा क्यान्सरलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाए, जुन त्यतिबेला डाक्टरहरूको विरल छनौटमा पर्थ्यो। पद्मभूषणले विभूषित यी डाक्टर भविष्यमा पनि यस्ता धेरै विभूषणबाट सम्मानित होऊन्– म ईश्वरसँग हृदयदेखि कामना गर्छु।
जसलोक पुग्नेबित्तिकै म कारबाट निस्केर कुद्दै डा. आड्वानीको क्याबिनमा पुगेँ। हामी समयभन्दा अगाडि नै आइपुगेछौं। मेरो छटपटी झन् बढ्यो। पेटभित्र अँध्यारो सुरुङ खनिएझैं म रित्तो महशुस गर्दै थिएँ।
करिब एक घन्टा डाक्टरलाई पर्खंदा आमा र म दुवै उनको क्याबिनमा मौन थियौं। मानौं, हाम्रो आवाज त्यही अँध्यारो सुरुङमा कतै अलप भएको छ।
साँझ छिप्पिँदै थियो। आकाशमा चन्द्रमा देखिएको थिएन। औंशीको रात होला।
परबाट ह्विलचेयरको चक्का घुमेको खर्रर आवाज मेरो कानमा ठोक्कियो। आँखा तन्काएँ। अस्पतालको लामो करिडोरमा पल्लो कुनाबाट डा. आड्वानी आउँदै गरेका देखिए।
उनको ओठमा मुस्कान छरिएको थियो। जसमा आत्मविश्वासको लहर दौडिएको म प्रस्टै देख्थेँ। मैले हतारहतार आफ्नो सारा रिपोर्ट उनीतिर तेर्स्याएँ। उनी रिपोर्टका पन्नाहरूमा मिहिन आँखा दौडाउन थाले। म उनको आँखाको भाव पढ्न आफ्नो आँखा दौडाउन थालेँ।
हामी साँझतिर अस्पताल छिरेका थियौं। अहिले रातको झन्डै ११ बज्दै थियो।
'मनीषा, म केही थप परीक्षण गराउन चाहन्छु– पेट स्क्यान र सिटीस्क्यान पनि,' डा. आड्वानीले तीखो नजरले मतिर हेर्दै भने, 'तर, अहिले ढिला भइसक्यो। तपाईं घर जानू। भोलि बिहान खाली पेट आउनुहोला।'
ओहो, डा. आड्वानीले भोलि फेरि मेरो परीक्षण गर्नेछन्! उनले भन्दे हुन्थ्यो नि, काठमाडौंबाट ल्याएका यी सबै रिपोर्ट गलत हुन्! मलाई केही भएको छैन। सामान्य पेटको समस्या हो। कलेजोको संक्रमण। अब भोलि बिहानसम्म म कसरी कुरूँ!
आमालाई पनि सायद यही आश थियो।
मैले मुम्बईको घरमा दुइटा कुकुर पालेकी छु– बडी र स्पार्की। त्यो रात लामो समयपछि मलाई देख्नेबित्तिकै मेरा यी दुवै साथी पुच्छर हल्लाउँदै, उफ्रिँदै, लाडिँदै मछेउ आए।
त्यो दिन मैले थाहा पाएँ, कुकुरसँग छैठौं इन्द्रीय हुँदो रहेछ। म घरमा छिर्नेबित्तिकै बडी त छाया बनेर मेरो पछि लाग्यो। उसले एक सेकेन्ड पनि मलाई छाड्न मानेन। म जहाँ जान्थेँ, ऊ पछ्याउँदै आउँथ्यो। मेरो खुट्टामा लुपुक्क टाँसिएर बस्थ्यो। ऊ मलाई आफ्नो तेजिलो र रसिलो आँखाले हेरिरहन्थ्यो। सायद ऊ मलाई सान्त्वना दिँदै थियो।
के उसले मेरो मनभित्र चलेको हुन्डरी बुझेको थियो?
भोलिपल्ट डा. आड्वानीले मेरो परीक्षण र स्क्यानहरू फेरि गराए। सबै सकेपछि उनले मलाई करिडोरको पछिल्लो कुनामा रहेको कोठामा बसाले। त्यहाँ एकान्त थियो। मलाई एकान्तकै खाँचो थियो। म फेरि एकचोटि नतिजा पर्खिरहेकी थिएँ।
मेरो हालत त्यो परीक्षार्थीजस्तो थियो, जो एकचोटि फेल भएर फेरि अर्को परीक्षा दिँदैछ।
मेरो धैर्य गुम्दै थियो। छटपटी बढ्दै थियो। लाग्दै थियो, म आफैं कुदेर डाक्टरको क्याबिनमा जाउँ र सोधुँ, 'डाक्टर, मेरो रिपोर्ट आएन?'
करिब २ बजे मैले करिडोरको पल्लो कुनाबाट ह्विलचेयरको खर्रर आवाज आफूतिर आइरहेको सुनेँ।
मैले आफूलाई थाम्नै सकिनँ। ढोकाबाट बाहिर हेरेँ। उनीतिर आशातीत नजर फिँजारेर उभिइरहेँ।
तर, यो के? उनको आँखा किन यति मलिन? उनको ओठको त्यो विश्वासिलो मृदु मुस्कान खोइ आज कता हरायो?
उनी कोठाभित्र आए। अरू डाक्टरहरू पनि जम्मा भए। म टुलुटुलु उनीहरू सबैलाई हेर्दै थिएँ। जवाफको प्रतीक्षामा।
'मनीषा, रिपोर्ट सही रहेछ, तपाईंलाई क्यान्सर भएको छ,' डा. आड्वानीले कुरा नचपाई सोझै भने, 'अन्तिम चरणको, पाठेघर क्यान्सर।'
मेरो मुखबाट अनायासै लामो सुस्केरा निस्क्यो।
मैले मनमनै भनेँ, 'म मर्न चाहन्नँ।'
जसलोक अस्पतालका डा. सुरेश आड्वानीले क्यान्सर पुष्टि गरेपछि हामीले आगामी उपचारबारे धेरै सरसल्लाह गर्यौं। डाक्टरसँग, परिवारसँग, इष्टमित्रसँग। सबैको रायमा क्यान्सरको उपचार निम्ति संसारमै कहलिएको अमेरिकाको न्यूयोर्क जाने निधो भयो।
म उस्तै छटपटी र व्यग्रतासाथ न्यूयोर्क पुगेँ।
डिसेम्बरको चिसोमा न्यूयोर्क पुग्दा मलाई थाहा छैन, न्यूयोर्कको तापक्रम बढी चिसो थियो कि मेरो मन।
रोगको पहिचान, उपचार र निदान– यी तीन चरणमा मैले मेरो पूरा जिन्दगी बाँचेँ। यो त्यही अवधि हो, जब मभित्रका धेरै उफानहरू शान्त भए। म स्थिर भएँ। दृढ भएँ। आत्मबल हलक्कै बढ्यो।
यो किताबमा मेरो जिन्दगीको त्यही कालखण्डको आद्योपान्त छ।
मनीषाको अर्थ हो, सरस्वती। मेरो यो किताब मभित्रको सरस्वती खोज्ने प्रयास हो।
(बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले लेखक नीलम कुमारसँगको सहकार्यमा लेखेको आत्मकथा 'हिल्ड' को अनूदित अंश।)